अब विवाह, व्रतवन्ध घरमै गर्नुपर्ने, अन्यत्र गरे राजस्व बुझाउनुपर्ने ! -
अब विवाह, व्रतवन्ध घरमै गर्नुपर्ने, अन्यत्र गरे राजस्व बुझाउनुपर्ने !
चितवनको माडी नगरपालिकाले विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा लगायतका धार्मिक कार्य घरमै गर्नुपर्ने नियम लगाउने भएको छ ।
नगरसभाले गरेका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले अबका दिनमा आफ्नै घरमा बाहेक पार्टी प्यालेस लगायतका ठाउँमा विवाह, व्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्न नपाउने बताए ।
कार्यपालिका बैठकले घरमा विवाह गर्दा खर्च कम हुने भएकाले घरमा नै गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको हो । यसले खर्चमा कटौती हुने र देखावटी गरिने खर्चको नियन्त्रणसँगै समाजमा हुने विभेद्लाई समेत केही मात्रामा रोक्न सहयोग पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास रहेको प्रमुख ढकालले बताए ।
उनका अनुसार पार्टी प्यालेसमा विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेमा त्यहाँ गरिने खर्चको केही रकम नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सो रकमबाट नगरपालिकाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि खर्च गरिने उनले जानकारी दिए । अहिले नगरपालिकाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि आवास सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नगरपालिकाले दक्षिणा स्वरुप दिइने पैसा निर्धारण गरेको छ । नगरपालिकाको ३५औँ कार्यपालिका बैठकले दक्षिणास्वरुप १०१ रुपैयाँ कायम गरेको हो ।